You are at:Home»NHAU DZEMITAMBO»‘Junior Policy yafa’…Ngaimutsiridzwe: Mutasa l Tarenda rizere: Muzadzi
By Abel Ndooka on	 February 2, 2018 · NHAU DZEMITAMBO
MAKORE adarika, zvikwata zvemuCastle Premishiership zvaizivikanwa nemukurumbira wekubika vatambi vechidiki kuburikidza neJunior Policy avo vaizopinda muzvikwata zvevakuru kana vachinge vaibva izvo zvasiyana nanhasi uno apo zvave kutenga vatambi kunyangwe kubva kunze kwenyika.
Vatambi vakaita saMurape Murape kuDynamos vakatanga kutambira chikwata chevakuru achiri kakomana kadiki aine makore 16 okuberekwa sezvo panguva iyi akange abikwa zvakasimba kune vechidiki veDeMbare. Nerimwe divi, kuHighlanders – Peter Ndlovu – uyo akazove mutambi wenhabvu ane mukurumbira pasi rose akabva nekuchikwata chevadiki cheBosso zvekuti akatanga kutambira chikwata chevakuru aine makore 16 okuberekwa. Paakasvitsa makore 18, Peter akabva atengwa neCoventry City yekuEngland.
Muenzaniso waMurape Murape newaPeter unotaridza kukosha kwekuti vatambi varerwe vachiri vadiki izvo zvisiri kuitwa nezvikwata zvakawanda. Zvikwata zvizhinji hazvichakoshese vechidiki uye zvimwe haz
visisina Junior Policy sezvo zvave kungoita vatambi vekutenga chete.
MaAcademy enhabvu ndiwo azara uye basa rawo kubika vatambi achitengesa kuzvikwata zvemuno kana zvekunze kuti awane mari. Svondo rino, Kwayedza yakaita hurukuro nevarairidzi vezvikwata zvenhabvu zvakasiyana nevamwe vatambi vakamboita mukurumbira pamusoro penyaya yeJunior Policy iyi.
Murairidzi weDeMbare, Lloyd Mutasa, anoti chikwata chake chinofanirwa kugadzirisa nyaya yekusimudzira vatambi vechidiki.
“Zvinhu zvinoda kugadziriswa nekuchimbidza, mukana watiri kuona kuti unoda kuvharwa nekuchimbidza uye isuwo tiri kutsvaga vatambi vane makore chaiwo vadiki kuti tigoshande navo. Tinofanirwa kudira mari kuti tigonyatsobika tarenda ravo kuti zvatiri kushuvira zvigotifambira chaizvo nenzira yacho yatinoda,” anodaro Mutasa.
Anoti mwaka wega-wega vanoshevedza vatambi kuti vauye kuzozama mhanza yavo kuDeMbare apo vanotarisa vamwe vavanozotora kuti vapinde kuchikwata chevadiki.
Achibvunzwa kuti kana vachiumba tarenda revechidiki ava kwemakore akawanda ko sei gore negore Dynamos ichitenga vamwe vatambi, Mutasa anoti, “Zvinotora nguva kubika vatambi ava saka tinofanirwa kushanda navo kusvika taona kuti vave kukodzera kutambira chikwata chevakuru. Vamwe vanouya vane tarisiro yekupinda muchikwata chevakuru asi isu sevarairidzi tinoona tega kuti mutambi uyu haasati anyatsoibva toshanda naye.”
Mutevedzeri wemurairidzi weNgezi Platinum Gift Muzadzi anoti nhabvu yemuno iri kudzokera shure nekuda kwekushaikwa kwezvikwata zvevechidiki.
“Kune vatambi vechidiki vazere, vari kushaya kwekutambira nhabvu yavo nekuti zvikwata hakuna zvevechidiki uye kumaAcademy vanonzi bhadharai mari saka kana asina mari tarenda rave kungofa. Isu panguva yatakakura kuChitungwiza kwaive nezvikwata zvakawanda zvaibika vechidiki uye takakurira mumhuri yeDarryn T nevatambi vakaita saStewart Murisa, Alois Bunjira, Norman Mapeza, Lloyd Mutasa nevamwe vakawanda. Takakura tese tikazotambira zvimwe zvikwata zvikuru vamwe vakazoenda havo kuCAPS UNITED, vamwe kuDynamos,” anodaro.
Anoenderera mberi achiti, “Kusasimudzirwa kwevatambi vechidiki kwauraya bhora uye radzikira zvikuru. Mutambi anofanirwa kunge ane chikwata chaanokururira orerwamo uye oziva zvinenge zvichidiwamo nezvisingadiwe,” anodaro.
Shasha yakambonetsa ichitambira CAPS United nemaWarriors, Carlos Max, anoti Zifa inofanirwa kuona kuti yagadzirisa nyaya iyi yekusimudzira zvikwata zvevechidiki.
“Iro ibasa reZifa manje inofanirwa kuona kuti zvikwata zviri kukoshesa here Junior Policy uye yova nezvirongwa zvevechidiki kana kuumba kaligi kavo ako vanenge vachikwikwidzana mazera akasiyana,” anodaro Max.
Akafanobata chigaro chasachigaro weHighlanders, Modern Ngwenya, anoti basa rekusarudza vatambi rinoitwa naMadinda Ndlovu anove murairidzi weBosso. Madinda ndiye akasarudzwa kutsiva Erol Akbay uyo akasiya basa mwaka wadarika rekurairidza kuBosso.
Ngwenya paakabvunzwa neKwayedza kuti vechidiki vakakosherei sezvo chikwata chavo kubvira makore adarika chinopa mikana kuvatambi vakadai kuti vapinde muchikwata chevakuru uye mwaka uno chinonzi chakapinza vatambi vashanu kubva kuboka ravo reUnder 18, anoti, “Isu chedu chatinoita kutevedzera zvinodiwa naMadinda uye tinongotevera zvaanoda iye chete.”
Zvakadai, kuEurope zvikwata zvakaita seArsenal zvine mukurumbira wekubika vatambi vechidiki vakadai saJack Wilshere, Alex Iwobi naReiss Nelson avo vave kutambira zvikwata zvevakuru. Barcelona kuSpain inozivikanwa nekubura vatambi kubva muAcademy yavo inonzi La Masia iyo yakabika vatambi vayo vanoti Linonel Messi, Andreas Iniesta, Xavi Hernandez, Carles Puyol uye kashoma chikwata ichi kutenga vatambi vekunze.